ဘားကမ့် | ဟန်ဆန်း
ဘားကမ့်ရန်ကုန်ပုံရိပ်မှ ဒေသအလိုက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဘားကမ့်များသို့
နိုင်ငံတကာမှာပြုလုပ်တဲ့ Barcamp တွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ နိုင်ငံအမည်များနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ Barcamp များကို မတွေ့ရပဲ Barcamp London, Barcamp New York City, Barcamp Los Angeles, Barcamp Boston စသဖြင့် မြို့အမည်များကို အစွဲပြုပြီး ပြုလုပ်ကြတာကို တွေ့ရတယ်။
January 1, 2016 in နည်းပညာဆောင်းပါး, ဘားကမ့်.
ဘားကမ့်ရန်ကုန် ၂ဝ၁၂ နဲ့ ကျွန်တော့်ရှုထောင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဘားကမ့်ရန်ကုန် ၂၀၁၂ နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းဆောင်းပါးကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာအဖြစ် လွှင့်တင်ပါသည်။
December 30, 2015 in နည်းပညာဆောင်းပါး, ဘားကမ့်.
ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖိတ်မထားဘူး စိတ်ဝင်စားရင် လက်ရည်တူကစားနိုင်တယ်
ဘားကမ့်ရန်ကုန် ၂၀၁၀ အတွေ့အကြုံများနှင့် လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုမှုအကြောင်း စကားဝိုင်းကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လထုတ် ဖူးငုံဆယ်ကျော်သက်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပြခဲ့သည်ကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာအဖြစ် လွှင့်တင်ပါသည်။
December 29, 2015 in နည်းပညာဆောင်းပါး, ဘားကမ့်.
သူတို့ပြောတဲ့ ဘားကမ့်ရန်ကုန် ၂ဝ၁ဝ အကြောင်း
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်က ကျင်းပခဲ့သော ဘားကမ့်ရန်ကုန် ၂၀၁၀ အကြောင်း နည်းပညာဆိုင်ရာ အင်တာဗျူးဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပသည့် ဘားကမ့်၏ မှတ်တမ်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ရည်ရွယ်၍ အကိုးအကားပြုနိုင်ရန် လွှင့်တင်ပါသည်။
December 26, 2015 in နည်းပညာဆောင်းပါး, ဘားကမ့်.
မြို့အမည်ဖြင့် ကျင်းပသည့် ဘားကမ့်
ဘားကမ့်ဆိုသည်မှာ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ ‌တွေ့ဆုံသော တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ‌တွေ့ဆုံပွဲပုံစံသည် သမားရိုးကျ ပွဲကျင်းပပုံ‌များနှင့် မတူပဲ ဝါသနာ၊ ရည်မှန်းချက် တူညီသူများ စုစည်း၍ အ‌တွေ့အကြုံ၊ အသိပညာ‌များအား ဖလှယ်ကြသည့် ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်
January 17, 2010 in ဆောင်းပါး, နည်းပညာဆောင်းပါး, ဘားကမ့်.